ChiGerman, kuonekana neGerman 3,14 ... - GERMAN
Tora kune 3,14 ...
« : Ndira 04, 2013, 03:36:17 am »
-> Ndiri kunyorera kune vese vandinoda, shamwari dzinodikanwa kwekuonekana kwekupedzisira kubva pano ...
Ini handizoenderera mberi nenhengo yangu muchiGerman zvekare, Mwari akubatsire, ndinotenderwa kune chero wandinokodzera,
Ndokumbirawo uite kurudyi kwako. Ndinokudai mese zvakanyanya, ndinozvipa kuna Mwari .. Garai zvakanaka ..
Re: Kunaka kune 3,14 ...
« Reply #1: Ndira 04, 2013 na 03:41:53 pm »
« Reply #2: Ndira 04, 2013 na 08:17:07 pm »
Iwe uri munzvimbo yakanakisisa iwe unofanira kuva ... muminyengetero yangu ...
« Reply #3: Ndira 04, 2013 na 09:34:48 pm »
Handina kunzwisisa. ??
« Reply #4: Ndira 04, 2013 na 11:30:40 pm »
-> Kwete yooook yekuita nemumwe wenyu Ndokumbirawo usazvione pachako, shamwari .. takave nezuva rakanaka kwazvo newe, takaseka, tikachema, takatsamwa asi tichiri baristic, takagovana zvese. Ini ndinotenderwa kunaani nani kodzero dzangu dzakapfuura, imi mose ndipei kodzero yenyu kwandiri, hapana chakaipa, musazvidya moyo, ndinogara ndichikurangarirai mukona yemoyo wangu. Ivai nekuchengetwa kuna Mwari, imi mose :)
« Reply #5: Ndira 05, 2013 na 09:58:56 pm »
Ndine urombo chaizvo kuti foramu iyi yakarasikirwa nhengo inobatsira senge iwe
Ini ndinotenderwa kunaani nani kodzero dzangu dzakapfuura, imi mose ndipei kodzero yenyu kwandiri, hapana chakaipa, musazvidya moyo, ndinogara ndichikurangarirai mukona yemoyo wangu. Dai mese makapihwa kuna Allah :)
..... zvinorevei halal ... ndinokushuvira kubudirira muhupenyu hwako, mukoma Onur.
« Reply #6: Ndira 09, 2013, 11:40:08 am »
-> Hapana chekugumbuka nezvacho, ndichaenderera mberi nehupenyu hwangu chero kupi zvako pasi rese sekunge Mwari apa hupenyu hwangu. Ngatisanganei muminamato, inshuwa. Hama Muharrem, Mwari vakuropafadzei pane zvese. Ndokumbirawo uvhare account yangu uye undizivise neemail, iwe?
« Reply #7: Ndira 09, 2013 na 12:27:38 pm »
Yakatorwa kubva: 3,14 - Ndira 09, 2013 na11: 40: 08 am
NDINOVIMBA NESE MUNHU KUNA MWARI.
Unogona kudzima account yako pachako painoti bvisa account yangu pasi peprofile -> account masetingi
Re: WELCOME kusvika 3,14: D
« Reply #8: Kurume 08, 2014, 11:24:13 am »
-> Handizive, unoyeuka here, paive nemumwe munhu ainzi Onur aive nehushamwari, anobatsira, mudiwa wechiGerman, aigara achiedza kuseka?
« Reply #9: Kurume 14, 2014 pa03: 33: 06 pm »
Yakatorwa kubva: roye - Ndira 04, 2013 pa 08:17:07 pm
Onur anofarira kuuya nekuenda saizvozvo, hameno
Usauye zvakare ...
Ndine urombo, iri pano.
3,14 yatosvika :)
« Reply #10: Kubvumbi 02, 2014, 12:09:08 pm »
-> Ndakaiwana yakanaka forum maswera sei shamwari dzekare neshamwari nyowani